Jasiiradaha Cook Islands ee Badbaadinta Hantida
Hay'adda Cook Islands Trust ayaa ah tan ugu wanaagsan ee ilaalinta hantida adduunka oo dhan. Waxay ku taalaa koonfurta Hawaii, Jasiiradaha Cook Islands waxay caddeeyeen waqti iyo waqti mar kale inay lahaadaan taariikhda kiis kiiska ilaalinta kalsoonida hantida. Kiis kasta oo laga doodi karo, hantida macmiilka waa la ilaaliyay. Waa tan tusaale. Kumaa ugu xoog weyn ee noqon doona mucaarad sharci ah? Qaar badan baa dhihi lahaa Dowladda Mareykanka. Waxaa jiray dhowr dhacdo oo ay Dowladda Mareykanku isku dayday inay buriso kalsoonida. Labada xaaladoodba, dawladdu way luntay hantidoodana wali way ku go'antahay kalsoonida dhexdeeda.
Waxaa muhiim ah inaan ogaano in si ula kac ah aan u abuuri laheyn aamin hanti ilaalin hanti si looga fogeeyo hantida Dowlada Mareykanka. Marka waxaan si fudud u xusaynaa xaqiiq si aan u muujino xoogga qalabkan sharciyeed. Marka, ma nihin ujeedo inay tahay inaan u isticmaalno gawaarida sidan oo kale ah.
Sidee Aas Ahaa Cook Islands Trust
Waa tan sida ay si hufan u dhisan tahay howlaha loo yaqaan Cook Islands Trust. Qofka kaa soo horjeeda ee sharciga ah ayaa ku qancinaya maxkamadda inay kaa dalbato inaad, “rogto lacagta.” Markaa, waxaad si wada jir ah warqad ugu qortaa wakiilka kuna ogeysii inaad ku amartay inaad soo celiso lacagta. Waad haysataa nuqul warqad iyo lambar raad-raac ah oo tus garsooraha inaad adeecday. Wakiilka, dhinaca kale, waxaa looga baahan yahay inuu u hoggaansamo tilmaamaha ku qoran camalka Cook Islands Trust. Waa aaminaad ilaalin hanti. Markaa, waxaan gelinaa “erayga xaragada” aaminaada. Qoddobka ayaa sheegaya in wakiilku ka mamnuuc yahay sii deynta lacagaha marka ka-faa'iideystaha lagu qasbay inuu ku dhaqaaqo amar maxkamadeed.
Sidaa darteed wakiilka, ee ku nool meel ka baxsan dalkaaga isla markaana ka baxsan meel ka baxsan maxkamaddaada, ma wada shaqeyn doono. Waad ka badbaadsan tahay waxyeelada maxaa yeelay waxaad si buuxda u raacday amarada garsoorka. Taasi waa, waxaad weydiisay wakiilka inuu soo celiyo lacagaha. Sidaa darteed, waxaad joogtaa meel si buuxda aad ugu hoggaansantay amarradii garsooraha. Wakiilka, si kastaba ha ahaatee, ma uusan sameynin, taas oo ah difaac sharci oo sax ah.
Adeegsiga aaminaad dhinaca dibedda ah waxay la mid tahay milkiilaha ganacsiga aasaasida shirkad ku taal Nevada ama Delaware. Wuxuu sidaas u sameyn lahaa sababtoo ah sharciyadooda ka sarreeya, halkii uu ka dhisi lahaa shirkad waddan kale. Sameynta aaminaad Jasiiradaha Cook Islands ama xukun kale oo ku habboon si looga faa'iideysto shuruucdooda wanaagsan waa isku mid. Waa arin lagu dooranayo xukunka awoodaha sharciga ugu fiican xaaladaada.
Sideen ku ogaanayaa inaan ku aamin karo aaminka aaminka Cook Islands?
Marka hore, wakiilku uma baahna inuu soo galo ilaa "wax xun" ay dhacaan. Midda labaad, waligeed ma dhicin wakiil haystay oo qaatay lacagta macaamiisha. Tani waa qayb ahaan maxaa yeelay dawladda Cook Islands waxay si xushmad leh u doorataa cidda ay u oggolaanayaan inay lahaadaan shatiga wakiilka. Intaa waxaa sii dheer, waxay si adag u difaacaan warshadooda adeegyada maaliyadeed. Aaladahaan sharciga ah waa isha ugu weyn ee dakhliga gobolka. Marka, wakiillada waa shati, si joogto ah loo kormeero oo si dhow loola socdo. Marka saddexaad, shirkad caymis ayaa xidhi doonta wakiillada, markaa maaliyaddihii aad ku aaminay ayaa la cayminayaa. Intaa waxaa dheer, maskaxda ku hay inaad aasaasayso aaladdan sharciyeed si aad uga ilaaliso hantida ka soo horjeeda dacwadaha macangagnimada ah iyo kuwa amar-ku-dirirka ah.
Marka, miyaad jeceshahay inaad hesho fursad ah '100%' ee lacagtaada ay maxkamaduhu qaadanayaan? Mise waxaad jeceshahay inaad yeelato wakiil ammaaneysan oo shati leh, oo aan waligiis lacag macaamiil ka qaadin sameyn waxa aad ku siisay inay sameeyaan: ilaali lacagtaada. Intaa waxaa sii dheer, waxaan u adeegsanaa shirkad aamin ah oo ku dhawaad ​​afar sano jirsatay.
Kahor inta "wax xun" dhicin, waxaad tahay adiga jiidaya xargaha. Adiga ayaa gacanta ugu jira akoonnada bangiga, iwm. Sidee? Waxaan sameyneynaa shirkad deyn xadidan oo xadidan ka leh xeebaha (LLC), jasiiradda Caribbean ee Nevis maxaa yeelay awooddan waxay siisaa ilaalin hanti sare oo LLC ah. Aaminaadu waxay leedahay 100% ee LLC. Waxaad tahay maamulaha LLC. Xisaabaadka bangiga waxaa lagu hayaa LLC. Waxaad tahay saxeexa akoonnada bangiga.
Marka, si loo eego, aaminaada ayaa leh LLC ka baxsan xeebaha. Waxaad tahay maamulaha LLC-ka ee xeebaha. Waxaad gacanta ku haysaa koontarool saxeex ah akoonnada bangiga.
Markuu "Waxyaabaha xun" ay dhacaan
Marka “waxa xun” ay dhacaan, wakiilku wuxuu tallaabo u qaadayaa inuu ku ilaaliyo oo uu kuu beddelo maareeyaha LLC. Markaa, markii lagu amro inaad soo celiso lacagta, ammaano hayaha, oo ku nool dalka dibadiisa oo aan ku xidhnayn dalabka maxkamadda maxalliga ah, wuxuu ilaaliyaa xisaabaadkaaga.
Si dib loogu celiyo, badbaadada maaliyadeed iyo xasiloonida maskaxda ee macaamilka, waqtiga kaliya ee wakiilka gaarka ah uu caadi ahaan soo galayo waa marka maxkamadaha ay lacagtaada qaadi doonaan. Marka, sidaan horay u soo sheegnay, waxaa wanaagsan inaad lacagtaada ku aaminto aalad sharciyeed oo ilaalisay lacagta macaamiisha waqti kasta inta ay noqon laheyd '100%' hubinta in qofka kaa soo horjeedda sharciga ahi uu ku bixi doono hantidaada aadka u shaqeysata, miyaadan aqbalin ?
Mar haddii “wax xun” ay ka baxaan xargaha xakamaynta, maaraynta LLC, ayay kugu noqdaan oo adiguna waxaad ku soo laabanaysaa kursiga darawalka dhammaan lacagtaada si xeeladeysan. Markii aad ku dhex jirtid xareeyaha sharciga, wakiilkaagu wuxuu kaa bixin karaa biilasha adiga oo adiga ku matalaya. Waxay lacag ugu gudbin karaan dadka aad ku kalsoon tahay kuwaas oo, adigana kuu xanaanayn doona, iwm. Marka, dhaqaale ahaan ayaa laguu daryeelaa, laakiin kuwa kaa soo horjeedaa ku heli maayaan lacagtaada. Natiijada saafiga ah ayaa ah in lacagaha aad soo shaqeysay oo aad ku shaqeysay ay yihiin aamin iyo amaan.
Qalabka Kahortagga Hantida ee Ultimate
Kaliya waxaad fursad ka heli doontaa dhulkaan. Marka, ku raaxaysashada ilaalinta aan ka hadlayno halkan waxay u baahan tahay ficil dhinacaaga ah. Aamminaad dhis Dhaqaalahaaga geli Waxaan aragnay macaamiil aad u badan oo nooga mahadcelinaya si weyn oo aan uga caawinay iyaga inay ku raaxeystaan ​​faa'iidooyinka ikhtiyaarkan iyo u xajinta wax kasta oo ay uga shaqeeyeen. Dhanka kale, waxaan sidoo kale aragnay macaamiisha oo ku lumaya waxkasta oo curyaan ah ee falanqaynta.
Waxaa jira kooxo gaar ah oo dano gaar ah leh, sida xubnahan oo ka mid ah xirfadlayaasha sharciga oo aan mushaar la siinin haddii hantidaada la ilaaliyo, kuwaas oo isku dayi doona inay kaa horjoogsadaan samaynta kalsooni. Waxay isku deyi karaan inay ku cabsi geliyaan oo ay ku tusaan kiisas aad dhif u ah halkaas oo garsooruhu uusan raacin sharciga halkaas oo ay ka faa iidaystaan ​​ka faa iidaystayaashu. Waxa qaswadayaasha ay u sheegi waayaan waa sheekada oo dhan. Kiiska Anderson, tusaale ahaan, aaminaada waxaa loo dejiyay khalad. Qareenka aasaasay aaminaaddan ayaa ka dhigtay macaamiisheeda labadaba ka-faa'iideystayaasha aaminaada iyo ilaaliyaha kalsoonida.
Tani waxay ahayd khalad doqonimo ah dhinaca qareenka maxaa yeelay waxay ka faa'iideysteyaasha ku siineysaa booska dheeriga ah ee saameyn ku yeelashada bedelka wakiilada iyo ka-faa'iideystayaasha. Garsooraha ayaa sheegay in sababta oo ah ka-faa'iideystayaashu ay sidoo kale yihiin ilaaliyayaasha in ay abuureen wax aan macquul aheyn oo ay ku shaqeeyaan. Warka aad ufiican ayaa ah in kiiskani uu ahaa marag cajiib ah in xitaa kiis lagu aaminay khalad, aaminaada wali ilaalinayso hantida macmiilka.
Dacwaduhu waa Qayb Nolosha ka mid ah
Beer walba waxay leedahay cayayaanka iyo haramaha. Marka, beero walba waa in lagu hayaa. Maaha in loo fikiro sidaas waa caqli-gal. Ilaalinta beerta waxay qaadataa talaabo. Ilaalinta dhaqaalahaaga waxba kama duwana. Waxaad u baahan tahay inaad tallaabo qaaddo si aad u ilaaliso beertaada dhaqaale ama dhiqlaha iyo sharci darrada ayaa la wareegi doona. Si loo haysto jardiino caafimaad leh, ficil ayaa loo baahan yahay.
Difaaca ugu adag ee aaminaada la bixiyo ayaa ah lacag caddaan ah oo dareere ah oo lagu hayo akoon bangi oo caalami ah oo aamin ah. Bangiga la adeegsaday waa inuusan lahaan waax ku habboon dalkaaga. Marka laga hadlayo dhismaha guryaha, maxkamadaha maxalliga ahi waxay la wareegi karaan dhismaha maxalliga ah. Marka, lahaanshaha guryaha gudahooda ee LLC ee ay aamisan tahay kalsoonidu way fiicantahay. Si kastaba ha noqotee, markii sheyga xun uu kor u qaado madaxooda foosha xun waxaa la doorbidayaa in si dhakhso leh loo iibiyo guryaha iyo in lagu xafido lacagaha ka baxsan badeecada marka loo eego hantida guud ahaan la lumiyo. Bedel ahaan, qofku wuxuu duubi karaa deyn sharci ah oo ka dhan ah hantida oo wuxuu ku xirayaa lacagtii ku jirtay isla xisaabtan gudaha qaab dhismeedka aaminaadda / LLC.
Waxaan ilaalinaa xirfadlayaasha
Si joogto ah, waxaan u aasaaseynaa aaminno qareeno iyagu, gadaal, dib ugu iibiya macaamiishooda. Sidoo kale waxaan barnaa siminaaro ilaalinta hantida ah xubnaha xirfad sharciyeedka. Intaas waxaa sii dheer, waxaan u sameynay aamino badan macaamiisha si toos ah macaamiisheena. Qodobbada qorsheynta guryaha ayaa lagu dari karaa aaminaadda; Nooca legalese ee, “Markaan dhinto wax waliba waxay u gudubtaa seygayga / xaaskayga iyo markaan dhintoba wax waliba waxay wadaagaan carruurta si siman,” tusaale ahaan.
Ka digtoon bixi hal adeeg bixiye oo jooga suuqyada kaasoo taatikoodu kobcinayo qaab dhismeedka kalsoonidiisa iyadoo la dayacayo xulasho kasta oo lagu ilaaliyo hantida, oo ay ku jirto ikhtiyaarka aan ka hadlayno halkan. Wuxuu kor u qaadaa kalsoonidiisa maxaliga ah ee daciifka ah, taas oo aan maxkamad la soo taagin, oo hoos u dhigta dhammaan xulashooyinka laakiin u gaar ah. Looma baahna in la yiraahdo, isagu ma uusan sheegin kiisaska tirada badan ee muujinaya xoogga kalsoonida jasiiradaha Cook Cook. Wuxuu ka hadlayaa kaliya kiisaska anshax xumada ah oo ay garsoorayaashu raacin sharciga oo ay carrab ku siiyeen golayaasha kalsoonida. Intaas waxaa sii dheer, wuxuu ku cayaarayaa xaqiiqdaas in aaminaada ay ilaalinayso dhaqaalaha macaamiisha markasta.
Dhibaatada iftiinka leh ee ikhtiyaarka uu dhiirrigelinayo ayaa ah in kalsoonidiisa maxalliga ah loo tirtiri karo sidii duulaan ka hooseeya sanka garsooraha maxalliga ah. Sidaa daraadeed, iyada oo la adeegsanayo awoodda aan kala go 'lahayn ee ay si isdaba joog ah u muujiyeen Jasiiradaha Cook, inta badan annaga oo ku sugan dhul ilaalin hanti oo aan lahayn ujeeddooyin qalqalloocan dhammaanteen waxaan ku raacsanahay in aaminaadda laga wada hadlay halkan ay bixiso, illaa iyo hadda, ilaalinta ugu xoogan ee hantida la heli karo maanta.
Soo wac waqti kasta, saacadaha 24 maalin kasta, wixii macluumaad dheeri ah ee ku saabsan sameynta Cook Islands Trust, Nevis LLC iyo koonto ka socota dibedda si loo ilaaliyo hantidaada.